Xarun Ebola oo dhallinyaro ay gubeen - BBC News Somali
Xarun Ebola oo dhallinyaro ay gubeen
Image caption Dadka ayaa aad uga baqaya in cudurka ay qaadaan
Dad isugu soo baxay dalka Guinea ayaa hor-istaagay hay’adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, waxayna u diideen in xarun Ebola oo lagu sii hakiyo bukaanada oo hay’adda ay ka furtay magaalada Kissidougou ee koofurta dalkaasi.
Bulshooyiinka ku nool qeybo ka mid ah galbeedka Afrika waxa ay ka soo horjeesteen dadaalada lagula tacaalayo caabuqa, waxayna cabsi ka qabaan in cudurka uu ku dhoco shaqaalaha caafimaadka ayna kaddib ka qaadaan goobaha dadka lagu daaweeyo.
Booliska ayaa sheegaya in kooxo dhalinyaro ah ay gubeen teendhooyiin ay lahayd hay’adda MSF, ayna ceyrsadeen saqaalihii hay’adda.
Waxay ku qeylinayeen “halkan Ebola ha inoo keenina”. MSF ayaa sheegtay in muhiimadda xaruntaasi dhowaantan loo sameeyay ay tahay in nawaaxigaasi lagu arkay dad badan oo looga shakiyay inay cudurka qabaan.
Waxay tilmaamtay hay’adda ay doonayaan in bukaanada in karantiilo oo la geeyo xarumaha daaweynta sida ugu dhaqsaha badan.
Dadka u dhashay dalka Guinea, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada miyiga ah waxa ay shaki ka qabaan howlaha lagula dagaalamayo Ebola.
Bishii September ee sanadkan, dad ku nool tuulo ayaa baangado iyo budad ku dilay sided qof oo wacyigelin ku saabsan cudurka sameyneysay.